The 6 Ga Gbalịa Austrian Nri | Save A Train
Home > Travel Europe > The 6 Ga Gbalịa Austrian Nri
Ndị a bụ ndị m atụgharị n'uche na nke kacha mma na mpaghara efere m mgbe ụtọ, n'oge m ịnọ na Austria. Anọ m ebe ahụ n'oge okpomọkụ 2016 m 4-ọnwa ụwa na a obere-sized obodo NGO. The ụwa ahụmahụ bụ oké, na m nwetara izute nkà eto eto ndị mmadụ, onye m na-akpọtụrụ ruo ugbu a, na enwewo m ike ime eme na nkà kụziiri m ụwa na m ugbu a na ọrụ na Singapore.
The nri-ezi na Austria. Ezie na ọ bụghị m mfe emepụtaghachi uto nke Austria na Singapore n'ihi elu mgwa na-akwụ ụgwọ (Ebe a, ọtụtụ ndị nri na-imported si mba ọzọ, ka Singapore manufactures obere ruru ya obere ala nha), mgbe ụfọdụ ọ dị mma dị nnọọ agachi banyere ochie Austrian ụbọchị ka m obi ụtọ na m ọtụtụ kwa ụbọchị ndụ na Singapore. Ezi-echeta ndị ka ọhụrụ na uche m.
Tupu jumping nri n'ime kpọmkwem nri na m akụkọ na ya, M ga-achọ ịkọrọ a bit nke backstory nke nri. Dị ka Habsburg Alaeze Ukwu chịrị a wider region (ugbu a n'oge Italy, Czech Republic, Slovakia, Romania, Ukraine, Poland, Slovenia, Croatia, na Bosnia) na Europe, oge a na Austrian nri nwere a ọtụtụ mmetụta ndị mbụ akụkụ nke Alaeze Ukwu na metụtara nanị akụkụ ụfọdụ nke dị efere na mpaghara Austrians 'chọọ. M olileanya na unu ga na-ịgagharị a kaleidoscope nke efere na-enwe ha na otú m na-ata n'oge m oge na Austria.
Kasespatzle (arụrụ n'ụlọ Austrian pasta chọọkwa ya mma na gbazee cheese)
Isi mmalite nke efere ndị a bụ nnukwu arụmụka - ụfọdụ na-arụ ụka na nke a sitere na mpaghara Swabian, na ụfọdụ ndị ọzọ ikwu na ndị kasị ochie ndekọ nke Kasespatzle dere azụ n'aka-dere cookbook ná mmalite narị afọ nke 17. The aha nwere ike na-abịa site na ije agwọ doughs n'ime a aru-sized mpempe, ma ọ dịghị akụkọ ihe mere eme gosiri na nke ya. N'oge a, efere a mara maka a òkè nke nkasi obi nri mgbe a ogologo ibugo onu na crisp Alpine ikuku. Ma ọ bụghị ya, i nwere ike ịhụ na ọ na ọtụtụ obodo ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Jere ozi na ọtụtụ akụkụ nke na-asụ German mba, na Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg bụ na West nke Austria) bụ ukwuu ewu ewu na Austria. The pasta na-mere si ọka flour, dị ka e kwuru aha si, okokụre n'ime obere ata aru mikpuru na grilled cheese. The udidi bụ n'ezie eluigwe, -agbaze na ọnụ. Eghe eyịm na spring eyịm tinye ngwa nri ka a creamy heaven efere (ha-eme oké ọrụ!).
Zurich na Vienna Ụgbọ oloko
N'ụzọ fere fere Ukwu
Were m azụ Austria - mgbe m na-ahụ kwuo sị na mgbe ọ bụla m na-ahụ nke a na swiiti Empire outlets (a Singapore si eduga Importers maka mba confectioneries, nke a bụ nanị ebe m nwere ike ịzụta n'ụzọ ngwaahịa). N'ụzọ bụ omenala Austrian ezinụlọ oruru na e hiwere na mbubreyo narị afọ nke 19. N'iji ike àgwà akara, nlezianya họrọ Efrata ma iconic pinkish nchịkọta, a ika na-ama n'ihi ịbụ a mbinye aka ncheta na Austria. Mannerschnitten (a hà nke hazelnut chocolate wafers) bụ ihe a ga-anwale; ọ bụghị otú ahụ na-atọ ụtọ ma ọ bụ ka keenweghiuto, a mgbe o yiri ka na-adọta mmasị m ụtọ eze. The hazelnut mgbe transports m azụ m amamiihe ụbọchị Vienna. Ugbu a, m na-agbalị mgbe ụfọdụ n'ụzọ chocolate wafers maka nri oge ma ọ bụ mgbe ọ bụla m na-agụụ na-agụ ya. M chere na n'ụzọ bụ dị na ụlọ ahịa na Central Europe naanị. Otú ọ dị, M doro anya na-ezighị ezi dị ka Mannar na ato uto na dị na Singapore kwa.
Schlutzkrapfen (ọkara ọnwa pasta jupụtara na ricotta cheese na akwụkwọ nri)
M zutere a na efere mgbe m na-ịgagharị Innsbruck na Western Austria nke a maara maka ya akara, na Golden ụlọ. M hopped n'ime a Cafe na-achọ ihe anaghị eri anụ. Agụ ihe menu, na pasta na akwukwo nri fillings dara mma m, otú ahụ ka m nyere iwu na ọ. M nọ na-eche nke ogologo pasta na chopped vegetables, ma ọ tụgharịrị na ọ na-esisịt pasta na ihe dị n'ime ya na e chọọkwa ya mma na a ifesa of cheese na chopped spring eyịm. Gbazee butter na-arụ ọrụ a ton mee efere a na-amị amị n'ọnụ m. ọzọ ihe, M ka na-echeta a onyenchere nwaanyi abịa m table na-arịọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọma. Agwara m ya na ọ bụ nnọọ ezigbo ụtọ - m nnọọ metụrụ ya n'anya banyere ahịa 'afọ ojuju na obi m jupụtara ịhụnanya. Sitere South Tirol (ugbu a akụkụ nke Italy), ọ prevalently a nkịtị nri agbata obi Tirol nakwa. A nnukwu ego nke oru metụtara-eme ka a n'agbanyeghị eziokwu ahụ ya anya ka mfe ime.
Leipzig na Vienna Ụgbọ oloko
Sachertorte (a ilu chocolate achicha na aprịkọt jam isi)
Otu n'ime "ga - eri" na Vienna, Austria. Ọ bụ a n'ezie obodo ọpụrụiche kere na njedebe nke Habsburg oge. Ị maara na e nwere onye na uche na-adịghị ma mkpa agha n'azụ a achicha? The abụọ Viennese achịcha dị iche iche Refeyim, Demel na Sacher ama ke a "atọ ụtọ" agha ala n'ihi na a ogologo oge na ọbụna mere ka a mkpari ikpe; bụ ndị kwesịrị-akpọ onwe ha ihe "mbụ Sachertorte"? Ole apricot ga-eji na- zuru okè nke achicha? Gịnị bụ ihe kwesịrị ekwesị okpomọkụ mmiri mmiri chocolate? kpọrọ, ha rụrụ ụka niile a na steeti ikpe, bụghị na-esi nri na klas ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ụdị. N'ikpeazụ, Sacher meriri n'agha na ugbu a prides onwe ha ịbụ "ihe mbụ Sacher torte." E wezụga ihe mere eme, M na ya onwe họọrọ Demel onye dị ka ọ bụ ndị ọzọ ụtọ na N'ụbọchị nke abụọ karịa nke Sacher. Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti Sacher "Sacher torte" na Demel counterpart? Ihe mbụ nwetara ubé elu ịnye ọnụahịa na ndị ọzọ achicha n'ígwé na ụba apricot n'ime achicha. Nke ikpeazụ bụ a bit dị ọnụ ala karịa na ọtụtụ creamier.
Frankfurt ka Salzburg Ụgbọ oloko
Berlin na Salzburg Ụgbọ oloko
Cologne na Salzburg Ụgbọ oloko
Dresden na Salzburg Ụgbọ oloko
A nnọchiteanya nke Vienna cosmopolitanism. na Vienna, e nwere ibu nke na ahịa na-ere "osisi" 'Efrata na-abịa site fọrọ nke nta niile n'ụwa. Nwere ike ịchọta nri na akụrụngwa si Russia, toro toro, Japan, India, na ndị ọzọ. Sitere Middle East, nke a bụ otu n'ime Viennese mkpịsị aka nri nhọrọ dị na mba ahịa. Mere si gwere chickpeas, na Falafel bọọlụ ike ga-eri na ụdị Falafel eyiri ma ọ bụ ụbọ na abadaba nri. Nke ọ bụla, Falafel abịa na a ụyọkọ nke ịkpụ akwụkwọ nri na yogurts ime dum oat Kechie ma ọ bụ pita nri. N'ịbụ a zuru okè vegan staple, nke a bụ efere enyi m na-eji na-enye m dị ka ha maara na m naanị abaghị nri nhọrọ dị ka a anaghị eri anụ. E nwere a ton nke Falafel ụlọ nile Vienna, ma m mmasị Falafel guzoro bụ onye na Brunnenmarkt. Mara dị ka a crazy ọnụ ala ahịa ebe onye ọ bụla nwere ike inwe a wider n'usoro nke Efrata na incredibly ala ahịa, a ahịa awade a òkè nke Falafel Kechie na na-na-efu na-erughị USD 1 ma ọ bụ otú, na-eme ka ọ eleghị anya ndị dị ọnụ ala na obodo. Ọ baghị uru ikwu, uto nke ihechi di nma dika nke di na ahia ahia ndi ozo nke Viennese.
My mmasị Austrian eji megharịa ọnụ! Achịcha achịcha bekee na mpekere apụl na ụyọkọ mịrị amị na-eme anwansi ma mee ka m nwee mmetụta nke eluigwe. The Akụkọ Mgbe Ochie nwere ya na Austria dị ụtọ Baklava eji megharịa ọnụ si Middle East. Baklava ka nke N'ụbọchị nke abụọ, achịcha dị iche iche na sugar na sirop, nke pụtara na ọ na-emikpu achịcha dị iche iche na sirop. N'ịbụ on a ọzọ fruity n'akụkụ, Apfelstrudel na-a metụtara nanị akụkụ ụfọdụ version of Baklava- nke a bụ ezi ihe atụ nke Austrian efere, dị ka a ọtụtụ n'ime ha nwere ike soro a Chọpụta ndị mbụ Austrian alaeze region nke ha e dị si. E nwere ọtụtụ Apfelstrudel Ezi ntụziaka online, na ụfọdụ ndị Ntụziaka dere na-emesapụ aka ezu ịkọrọ ha ezinụlọ Ezi ntụziaka na ụwa. Otú ọ dị, na eluigwe na ala na-achị bụ na mgwakota agwa kwesịrị ịbụ otú mkpa na achịcha dị iche iche siri nri nwere ike na-agụ akwụkwọ akụkọ na site na ya.
Banyere na-ede akwụkwọ: Mami-arụ ọrụ na Singapore ozi oge maka banyere 2 afọ. Ọ ka njem dị iche iche akụkụ nke ụwa nke ukwuu ma nnọọ ama ịgagharị a ebe ọhụrụ ọ Ahụtụbeghị. Mgbe ọ bụghị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-eme njem, ọ ọnwụ sọ ya free oge na-akpọ a dragon ụgbọ mmiri egwuregwu ma ọ bụ ịmụ asụsụ mba ọzọ.
Ị dị njikere inyocha Austria na-enwe ihe oriri ya utọ? nke kacha mma website ka Order ụgbọ oloko tiketi bụ Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F6-must-try-austrian-dishes%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
M a ejechi akwụkwọ blogger onye nwere ọtụtụ ahụmahụ ozizi na-amụta asụsụ nakwa dị ka na-arụ ọrụ mba na mba ahịa. Ya ide style agwakọta ma ya Ọnọnime Atụmatụ na +30 mba ma doo anya, nke o kwere bụ ihe na-agụ akwụkwọ na-achọ - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m